मतपेटिका सुरक्षाका लागि ढोका र झ्यालमा पनि सिलबन्दी
समाचार मतपेटिका सुरक्षाका लागि ढोका र झ्यालमा पनि सिलबन्दी
Ujyaalo मगलवार, मंसिर १२, २०७४ १६:४५:००
ताप्लेजुङ, मंसिर १२ – ताप्लेजुङका हिमाली गाउँमा रहेका चार मतदान केन्द्रका मतपेटिका सोमबार हेलिकप्टर मार्फत जिल्ला सदरमुकाम ल्याइएको पछि मतपेटिका संकलनमा सकिएको छ ।
सोमबार राति पौने १० बजेसम्ममा मतपेटिका जिल्ला सदरमुकाममा रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ल्याइएको सहायक मतदान अधिकृत गोपाल थापाले बताउनुभयो । जिल्लाको हिमाली क्षेत्रहरु फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका वडा नं. ७ को याङ्मा र ओलाङचुङगोला तथा फक्ताङलुङ गाउँपालिका–६ ग्याव्ला र घुन्साका मतपेटिका नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत जिल्ला सदरमुकाम फुङलिङमा ल्याइएको हो ।
हेलिकप्टर साथै पैदल र गाडी प्रयोग गरी कडा सुरक्षाका साथ मतपेटिका ल्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिएसपी ज्ञानेन्द्रबहादुर बस्नेतले बताउनुभयो । ताप्लेजुङमा रहेका ७३ स्थानका १ सय १४ मतदान केन्द्रका सबै मतपेटिकाहरु संकलन भइसकेको अधिकृत थापाले बताउनुभयो । ताप्लेजुङमा ७८ हजार ३ सय ९७ मतदाता मध्ये ६६.१ प्रतिशत अर्थात ५१ हजार ८२० जनाले मतदान गरेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
मतपेटिकाको सुरक्षा : ढोका र झ्यालमा सिलबन्दी
मंसिर २१ गते हुने दोस्रो चरणको चुनावपछि मात्र मत गर्ने भनिएपछि संकलित मतपेटिकालाई जिल्ला अदालतमा रहेका ४ वटा कोठालाई खाली गरेर राखिएको छ । दलका प्रतिनिधिले सिसी क्यामरा जोड्न माग गरेका छन् । नेकपा एमालेका तर्फबाट राधाकृष्ण पौडेलले सिसी क्यामरा जोड्न माग गर्नुभएको हो ।
तर सिसी क्यामरा जोड्नलाई प्रकृया लामो र बजेटको समेत भएकाले तत्काल सम्भव नहुने भन्दै विश्वासको वातारण बनाउँदै मतपेटिकालाई सुरक्षित गर्न सबैको साथ सहयोगको अवश्यकता भएको मृख्य निर्वाचन अधिकृत कृपासुर कार्कीले बताउनुभयो ।
एउटा कोठामा प्रतिनिधिसभाको मतपत्रलाई सुरक्षित गरिएको छ । अन्य एक/एक कोठामा प्रदेश सभा १ .(क) र प्रदेश सभा २ (ख) का मतपेटिका राखिएको छ । यस्तै अर्को एक कोठामा समानुपातिक तर्फको मतपेटिकालाई सिलबन्दी गरी राखिएको छ । चारैवटा कोठामा लाहाछाप लागाएर सिलबन्दी गरिएको छ । कोठामा रहेका झ्यालहरुमा पनि लाहाछाप गरी सिलबन्दी गरिएको छ ।
सुरक्षाको प्रत्याभूति भए पनि जिल्लामा रहेका ठुला दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितको वाम गठबन्दले रात दिन बसेर ड्युटी दिने भएका छन् । दिनमा एक/एक जना तथा रातमा एक एक जानले पालै पालो ड्युटी गर्ने सर्वदलीय सर्वपक्षीय भेलाले निर्णय गरेको हो ।